#नेपाल सरकार | Suvadin !
काठमाडौं । राजधानीको कलंकीस्थित लर्निङ रियल्स इन्टरनेश्‍नल (एलआरआई) स्कुलले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा एकलाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । शैक्षिक गुठि अन्तर्गत सञ्चालित उक्त स्कुलले थोरै भए पनि सरकारको कोरोना रोकथाम अभियानमा सहयोग पुगोस् भनेर सहयोग रकम जम्मा गरेको जनाएको छ...
चैत ९ पछि पनि यी सेवा खुल्लै रहने छन्
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको समयमा नेपाल सरकारले पनि उच्च सतर्कता अपनाएको छ । सरकारले भोली ९ गतेबाट लागुहुने गरी अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्‍द गरेको छ । तर, सरकारले जनताको दैनिकी जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई भने नियमियतिरुपमा सञ...
यी हुन् पप्पुसहित कालोसूचीमा परेका ७ कम्पनी
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित विभिन्न सात कम्पनहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा रहने छ भने अन्य कम्पनीहरू १ वर्षसम्म कालोसूचीमा रहने बताइएको छ ।&nbs...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेल्ने र बाँध्ने काम नगर्ने बताएका छन् । निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई पेल्ने र बाँध्ने काम नगर्ने बताएका हुन् । &nbsp...
कसरी पुरा होला सरकारको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल सरकारले तामझामका साथ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ औपचारिक रुपमा सुरुआत गरिसकेको छ । सरकारले २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्षको सुरुआत गरेको हो । गत बुधबार अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशरथ रंगशालामा एक समारोहकाबीच भ्रम...
नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति आजै गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले सातैवटा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी सोमबारलाई सारेको छ । आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी प्रदेश प्रमुखहरुहरुको नियुक्तिको तयारीमा थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक पछाडि सारेर नेकपाको सचिवालय बैठकमा सरिक हुँदा सम्भव नभएको बुझिएको छ । योसँगै साँझ ५...
उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारको दोस्रो पत्र
काठमाडौं । नेपालमा अवैध रुपमा लगानी गरी विभिन्‍न व्यवसाय गरिरहेका उत्तरकोरीयाली लगानीकर्तालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारले पुनः पत्राचार गरेको छ । उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान यसअघि दुईपटक काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डीसीएम किम जोङसँग मौखिक सहमति गरेको थियो । तर, त्यसको पालना नभ...
काठमाडौं आइपुग्यो डेढ अर्बको भिभिआइपी चढ्ने सरकारको हेलिकोप्टर
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भिभिआइपीका लागि खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टर काठमाडौं आइपुगेको छ । दिउँसो १२ बजेर ५३ मिनेटमा काठमाडौ ओर्लिएको उक्त हेलिकोप्टर १ अर्ब ४० करोड मूल्यको हो। इटालीबाट खरिद गरिएको हेलिकोप्टर सेनाको स्वामित्व र सञ्चालन हुने हेलिकोप्टरको दर्ता र नियमन भने नागरिक...
मौसम परिवर्तनका कारण अहिलेको मानवलगायतका प्राणीले विभिन्‍न खाले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । यतिबेला एक विशेष किसिमको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगुको त्रास फैलिएको छ । यसले मानवको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा प्रभाव पार्छ र कालान्तरमा अन्य रोग लाग्‍नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । विश...
बेलायतमा मृत्युको सजाय सुनाएको कैदी मौरी भागेपछि...
बीबीसी । टर्कीमा छुट्टी मनाएर फर्किएको एक परिवारको साथमा त्यहीँको प्रजातिको मौरी पनि तीन हजार किलोमिटर पार गर्दै बेलायत आइपुगेको बीबीसीले जनाएको छ । तर लगेजमा बसेर आएको ‘ओस्मिया एभोसेट्टा’ प्रजातिको सो मौरी बेलायतका मौरीहरुका लागि खतरनाक साबित हुने आशंकापछि सरकारी वैज्ञानिकहरुले त्यसलाई...
DilipKarki 390 0
DilipKarki 269 0
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्नेभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा न...
DilipKarki 214 0
सरकारले जनता कति खुसी छन् भनेर सर्वेक्षण गर्दै
काठमाडौं । सरकारले नेपाली जनताको खुसी मापन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तथ्यांक विभागले एक वर्ष लगाएर जनता कति खुसी छन् भनेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । ‍‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई आधार बनाएर विभागले सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । छिमेकी मुलुक भुटानले वैज्ञान...
भीरमा लड्‍न लागेको सरकारलाई कसले थाँप्छ काँध ?
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मुलुकमा निकै ठूलो काम गर्ने, आजसम्मका राज्यसत्ताले गरेका कमजोरीहहरुलाई सुधार्ने र मुलुकको चौतर्फी विकास गर्ने आशा नेपाली जनताको थियो । सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसकेको छ । पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको यो सरकारले जनताका आशाहरुमा उत्साह थप्‍ने काम त कहाँ हो कहाँ झन निराशा...
DilipKarki 236 0
Ashok Adhikari 929 0
राजाराम कार्की, काठमाडौँ, पुस २१ सरकारले माघ मसान्तभित्र पूर्व मूलबीउ आलु उत्पादनका लागि टिस्युकल्चर प्रयोगशाला स्थापना र स्क्रिन हाउस सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आलु र आलु बीउमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकाय आलुबाली विकास कार्यक्रम, खुमलटारले कार्य...
Suvadin Correspondent 555 0
Ashok Adhikari 7.6k 0